Otu ndị otu ịre ahịa na ahịa gị nwere ike isi kwụsị inye aka na ike ọgwụgwụ dijitalụ | Martech Zone
Afọ ole na ole gara aga bụụrụ m ihe ịma aka na-enweghị atụ. N'akụkụ onwe onye, ​​a gọziri m site na nwa nwa mbụ m. N'akụkụ azụmahịa, esonyere m ụfọdụ ndị ọrụ ibe m na-akwanyere ùgwù nke ukwuu ma anyị na-ewulite ndụmọdụ mgbanwe dijitalụ nke na-apụ n'anya. N'ezie, n'etiti nke ahụ, enweela ọrịa na-efe efe nke mebiri ọkpọkọ anyị na ọrụ ọrụ… nke na-alaghachi azụ ugbu a. Tụba n'akwụkwọ a, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, na ahụ ike… na ndụ m bụ zoo ugbu a.
Otu ihe ị nwere ike chọpụtala n'ime afọ ole na ole gara aga bụ na m kwụsịtụrụ pọdkastị m. Enwere m pọdkastị 3 na-arụ ọrụ afọ ole na ole gara aga - maka ịzụ ahịa, maka azụmahịa mpaghara, na maka ịkwado ndị agha agha. Pọdkastị bụ agụụ nke m, mana ka m lere anya n'ọgbọ ndu m na uto azụmaahịa, ọ naghị enye uto ego ha nwetara ozugbo ya mere m ga-ewepụ ya. Pọdkastị nkeji 20 nwere ike belata ihe ruru awa 4 n'ime ụbọchị ọrụ m iji hazie, dekọọ, dezie, bipụta na kwalite mmemme ọ bụla. Ịla ụbọchị ole na ole n'ọnwa na-enweghị nloghachi ozugbo na ntinye ego abụghị ihe m nwere ike imeli ugbu a. Akụkụ akụkụ… M ga-etinyegharịa pọdkastị nke ọ bụla ozugbo enwere m ike ị nweta oge ahụ.
Ike ọgwụgwụ dijitalụ
Akọwapụtara ike ọgwụgwụ dijitalụ dị ka ọnọdụ ike ọgwụgwụ nke uche na-ebute site na iji ọtụtụ ngwa dijitalụ eme ihe n'otu oge
Lixar, Ijikwa ike ọgwụgwụ dijitalụ
Enweghị m ike ịgwa gị ole oku ekwentị, ozi ozugbo na ozi ịntanetị m na-enweta kwa ụbọchị. Ọtụtụ bụ arịrịọ, ụfọdụ bụ ndị enyi na ezinụlọ, na - n'ezie - na haystack bụ ụfọdụ ndị ndu na nkwukọrịta ndị ahịa. M na-eme ike m niile nzacha na ịhazi oge m nwere ike, mana anaghị m akwado… ma ọlị. N'otu oge na ọrụ m, enwere m onye enyemaka onye isi na a na m atụ anya okomoko ahụ ọzọ… mana ịkwalite onye inyeaka na-achọkwa oge. Yabụ, maka ugbu a, naanị m na-ata ahụhụ site na ya.
Ịgbakọ ọrụ n'ime ikpo okwu m na-eme ụbọchị niile, ike ọgwụgwụ nkwurịta okwu dijitalụ dịkwa oke egwu. Ụfọdụ n'ime ihe omume na-akụda mmụọ na-agwụ m ike bụ:
Enwere m ụfọdụ ụlọ ọrụ na-apụ apụ oyi na-emezi nzaghachi ma na-eji ozi nzuzu dị ka igbe mbata m kwa ụbọchị. Inweta nke a n'elu igbe mbata gị… ma ọ bụ iji ozi-e kpuchie ozi RE: n'ahịrị isiokwu iji chee na anyị ekwuola na mbụ. Ọ dịghị ihe ọzọ na-akpasu iwe… M ga nzọ na nke a bụ ọkara nke igbe mbata m ugbu a. Ngwa ngwa m na-agwa ha ka ha kwụsị, agba ọzọ nke akpaaka na-abata. Ekwesịrị m itinye ụfọdụ iwu nzacha dị egwu na igbe ozi smart iji nwaa iweta ozi ndị dị mkpa na igbe mbata m.
Enwere m ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị na-akwụsị ịkpọtụrụ m site na email, wee ziga m ozi n'ofe netwọk mmekọrịta. Ị nwetara email m? bụ ụzọ doro anya iji mee ka m gbochie gị na social media. Ọ bụrụ na m chere na gị email dị mkpa, M ga-aza… kwụsị iziga m ọzọ nkwukọrịta na clogging elu ọ bụla ọkara m nwere.
Nke kacha njọ bụ ndị ọrụ ibe, ndị enyi, na ezinụlọ ndị na-akparị mmadụ ma kwenye na m na-akparị mmadụ n'ihi na anaghị m anabata ya. Ndụ m juputara ugbu a na ọ dị ịtụnanya nke ukwuu. N'ịtụle eziokwu ahụ na m na-arụsi ọrụ ike na ezinụlọ, ndị enyi, ọrụ, ụlọ, ahụike, na akwụkwọ m bụ ihe na-akụda mmụọ. Ana m ekesa nke m ugbu a N'ụzọ doro anya jikọọ ndị enyi, ezinụlọ, na ndị ọrụ ibe ka ha nwee ike idobe oge na kalenda m. Ana m echekwa kalenda m!
M na-amalite ịhụ ọzọ na ndị ọzọ ụlọ ọrụ SPAM m ozi ederede… nke karịrị infuriating. Ozi ederede bụ ihe kacha akpa ike na nkeonwe nke ụzọ nzikọrịta ozi niile. Ozi ederede oyi na-enye m bụ ụzọ doro anya nke na agaghị m eso gị mee ahịa ọzọ.
Anọghị m naanị m… dịka nsonaazụ nyocha ọhụrụ sitere na PFL:
Onye njikwa site na C-Level ndị na-aza ajụjụ na-enweta ihe karịrị ugboro 2.5 mozi-e nkwado ore kwa izu, nkezi 80 ozi-e kwa izu. Akụkụ akụkụ… Ana m enweta ihe karịrị otu ụbọchị.
Ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na-enweta otu nkezi nke ozi-e 65 kwa izu.
Ndị ọrụ ngwakọ na-enweta naanị 31 ozi-e kwa izu.
Ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ na-enweta ihe karịrị 170 ozi-e kwa izu, karịa 6 ugboro karịa ozi-e karịa nkezi onye ọrụ.
N'ime ọkara nke ndị ọrụ niile na-enwe ike ọgwụgwụ n'ihi oke mgbasa ozi mgbasa ozi dijitalụ ha na-enweta na ọrụ. 80% nke ndị na-aza ọkwa C na-eju afọ site na ọnụ ọgụgụ nke dijitalụ n'ọkwá ha na-enweta!
Otu m si emeso ike ọgwụgwụ nzikọrịta ozi dijitalụ
Mmeghachi omume m na ike ọgwụgwụ nzikọrịta ozi dijitalụ bụ:
Kwụsị - Ọ bụrụ na m nweta ọtụtụ ozi-e ma ọ bụ ozi oyi, ana m agwa onye ahụ ka ọ kwụsị ma wepụ m na nchekwa data ha. Ọtụtụ mgbe, ọ na-arụ ọrụ.
Agbagharala mgbaghara -Agaghị m asị"Ndo ...” ọ gwụla ma m tụrụ anya na m ga-azaghachi n'ime oge ụfọdụ. Nke a gụnyere ọbụna ndị ahịa na-akwụ ụgwọ ndị m na-echetara ọtụtụ mgbe na m na-ewepụta oge na ha. Ọ dị m nwute na m na-arụsi ọrụ ike na ọrụ zuru oke na ndụ onwe onye.
Hichapụ – M mgbe dị nnọọ ihichapụ ozi na-enweghị ọbụna a nzaghachi na ọtụtụ ndị na-adịghị nsogbu reamping ka SPAM m ọzọ.
Iyo – Ana m enyocha ụdị m, igbe mbata, na ụzọ ndị ọzọ maka ngalaba na mkpụrụokwu m na-agaghị azaghachi. A na-ehichapụ ozi ndị ahụ ozugbo. Ana m enweta ozi dị mkpa agwakọta na mgbe ụfọdụ? Ee… na na.
Ibute ụzọ – My igbe mbata bụ a usoro nke Smart Mailboxes na-ukwuu nzacha site ahịa, usoro ozi, wdg. Nke a na-enyere m mfe ịlele na onye ọ bụla na-azaghachi mgbe ndị ọzọ nke m igbe mbata bụ cluttered na nzuzu.
Enyena nsogbu – Ekwentị m dị na Agbagharala ma ozi olu m ezuola. Ee… ewezuga ozi ederede, oku ekwentị bụ ihe ndọpụ uche kacha njọ. Ana m edobe ihuenyo ekwentị m elu ka m wee hụ ma ọ bụ oku dị mkpa sitere n'aka onye ọrụ ibe, onye ahịa, ma ọ bụ onye ezinụlọ, mana onye ọ bụla ọzọ nwere ike ịkwụsị ịkpọ m.
Ihe Ị Pụrụ Ime Iji nyere Ike Nkwukọrịta Dijitalụ Aka
Nke a bụ ụzọ asatọ ị nwere ike isi nyere aka na mbọ nkwurịta okwu ire na ahịa gị.
Nweta Onwe Gị – Mee ka onye nnata gị mara ihe mere ị ga-eji na-ekwurịta okwu na ha, echiche nke ịdị ngwa, na ihe kpatara o ji baara ha uru. Ọ dịghị ihe dị njọ, n'uche nke m, karịa ozi efu "Ana m achọ ijide gị...". Achọghị m ịma… Ana m ọrụ n'aka ma ị dabara na ala nke ihe ndị m na-ebute ụzọ.
Emegbula akpaaka - ụfọdụ ozi dị mkpa maka azụmaahịa. Ụgbọ ala ịzụ ahịa agbahapụla, dịka ọmụmaatụ, na-achọkarị ihe ncheta ole na ole iji mee ka mmadụ mara na ha ahapụla ngwaahịa n'ime ụgbọ ahụ. Ma egbula ya… M na-ewepụta ihe ndị a maka ndị ahịa… otu ụbọchị, ụbọchị ole na ole, mgbe ahụ izu ole na ole. Ikekwe ha enweghị ego ha ga-azụta ugbu a.
Mee Atụmanya – Ọ bụrụ na ị na-aga akpaaka ma ọ bụ soro, mee ka onye ahụ mara. Ọ bụrụ na m gụrụ na email na oku oyi ga-esochi n'ime ụbọchị ole na ole, m ga-eme ka ha mara na ha agaghị enye nsogbu taa. Ma ọ bụ m ga-edeghachi ma mee ka ha mara na m na-arụsi ọrụ ike wee metụ ntọala nkeji iri na ise ọzọ.
Gosi ọmịiko – Enwere m onye ndụmọdụ ogologo oge gara aga na-ekwu mgbe ọ bụla ọ zutere mmadụ na nke mbụ, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ha nwere mfu na ezinụlọ ha. Ihe ọ nọ na-eme bụ ịgbanwe mmetụta ọmịiko na nkwanye ùgwù o nwere n’ebe onye ahụ nọ. Ị ga-emezigharị ozi-e onye na-anọghị na olili ozu? Agbaghara m ya. N'ihi na ọ dị gị mkpa apụtaghị na ọ dị ha mkpa. Nwee mmetụta ọmịiko na ha nwere ike ibute ihe ndị ọzọ ka mkpa.
Nye ikike - Otu n'ime ụzọ kachasị mma maka ire ere bụ inye ikike ka mmadụ kwuo Mba. Edela m ozi ịntanetị ole na ole n'ime ọnwa gara aga maka atụmanya na m na-emeghe email ahụ site n'ime ka ha mara na nke a bụ naanị email ha na-enweta ma enwere m obi ụtọ ịnụ azụ na ha adịghị mkpa. nke ọrụ m. Iji nkwanye ùgwù inye onye ahụ ikike ịsị Mba ga-enyere aka ihicha igbe mbata ha ma nye gị ohere ịghara igbu oge na-akpasu ndị nwere ike iwe.
Nhọrọ onyinye - Ọ bụghị mgbe niile ka m chọrọ ịkwụsị mmekọrịta nke mmasị, ma enwere m ike itinye aka na usoro ọzọ ma ọ bụ n'oge ọzọ. Nye onye nnata gị nhọrọ ndị ọzọ - dị ka igbu oge maka otu ọnwa ma ọ bụ nkeji iri na ise, ịnye njikọ kalịnda gị maka oge atọrọ, ma ọ bụ ịbanye n'ụzọ ọzọ nke nkwukọrịta. Usoro ọkacha mmasị gị ma ọ bụ usoro maka nkwurịta okwu nwere ike ọ gaghị abụ nke ha!
Nweta anụ ahụ - Ka mkpọchi mkpọchi na-ebelata ma njem na-emeghe, ọ bụ oge ịlaghachi na izute ndị mmadụ ebe nkwurịta okwu gụnyere mmetụta niile mmadụ kwesịrị ịkparịta ụka nke ọma. Nkwurịta okwu na-abụghị nke ọnụ dị mkpa iji guzobe mmekọrịta… na enweghị ike imezu ya site na ozi ederede.
Gbalịa ozi Direct - Ịgafe na ndị na-eme ihe ike karịa onye na-anabataghị ya nwere ike ịbụ ntụziaka na-ezighị ezi. Ị nwalela usoro mgbasa ozi ndị ọzọ dị ka ozi ozugbo? Anyị enweela nnukwu ihe ịga nke ọma site na iji ozi ozugbo wee tụọ atụmanya n'ihi na ọ bụghị ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji ya eme ihe. Ọ bụ ezie na ozi-e anaghị eri oke ego iji wepụta, a naghị eli mpempe akwụkwọ ozi gị ozugbo n'igbe ozi nwere ọtụtụ puku iberibe ozi ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na ndị na-azụ ahịa ga-eleghara ozi ozugbo ezubere iche anya na-adịghị mma dịka mgbasa ozi dijitalụ na-adịghị adị ma ọ bụ mgbawa ozi-e, ozi ozugbo emeziri nke ọma nwere ike ịmepụta ahụmịhe ga-echefu echefu yana mmetụta. Mgbe etinyere n'ime atụmatụ azụmaahịa nke otu ụlọ ọrụ, ozi ozugbo na-enye ụlọ ọrụ ohere ịnya ROI ka ukwuu wee mụbaa mmekọrịta n'etiti ndị ahịa ugbu a na n'ọdịnihu.
Nick Runyon, CEO nke PFL
Onye ọ bụla na-enwe ike ọgwụgwụ dijitalụ
N'ọdịdị azụmahịa nke taa, asọmpi maka echiche, ọpịpị na mindshare dị egwu. N'agbanyeghị na-esiwanye ike na n'ebe nile ngwá ọrụ ahịa dijitalụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahụ onwe ha na-agbasi mbọ ike inweta traction n'etiti ndị ahịa na atụmanya.
Iji ghọta ihe isi ike nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eche ihu na ịdọrọ uche ndị na-ege ntị, PFL nyochara ihe karịrị ndị ọkachamara ụlọ ọrụ 600 sitere na US. Nsonaazụ nke PFL's Nnyocha njikọ aka ndị na-ege ntị 2022 chọpụtara na nhazi nkeonwe, ọdịnaya, na usoro ịzụ ahịa anụ ahụ, dị ka ozi ozugbo, nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu n'ikike nke ụdị iji rute ndị na-ege ọkụ.
Pịa ebe a ka ibudata The Infographic
Isi ihe nchoputa sitere na nyocha nke ihe kariri ndi okachamara ulo oru 600 nke United States gunyere:
52.4% nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-enwe ike ọgwụgwụ dijitalụ n'ihi oke nzikọrịta ozi dijitalụ ha na-enweta.
80% nke ndị nzaghachi ọkwa C na 72% nke ndị na-aza ajụjụ na-egosi na ha na-enwe mmetụta nke ukwuu site na olu mgbasa ozi mgbasa ozi dijitalụ ha na-enweta na ọrụ.
56.8% nke ndị ọkachamara nyochara bụ O yikarịrị ka imepe ihe anatara site na ozi anụ ahụ karịa ozi-e.
Na akụ na ụba nlebara anya nke taa, ikike ijide ndị na-ege ntị wee nweta njikọ aka ha abụrụla ngwa ahịa dị ụkọ. Ike ọgwụgwụ dijitalụ bụ eziokwu nye ọtụtụ ndị mmadụ, nke pụtara na ụdị ahịa ga-achọrịrị ụzọ ọhụrụ iji kpalie ndị ahịa ime ihe. Nnyocha anyị kachasị ọhụrụ na-enye ìhè na mpaghara ahịa ahịa B2B dị oke asọmpi taa yana otu ụlọ ọrụ nwere ike isi jiri atụmatụ ngwakọ pụta ìhè nye ndị ahịa na atụmanya.
Nke a bụ ozi zuru ezu yana nsonaazụ nyocha emetụtara:
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta m maka N'ụzọ doro anya ke ibuotikọ emi.
Tags: 2022nke ọmaike ọgwụgwụ nkwurịta okwu dijitalụike ọgwụgwụ dijitalụozi ederedenyocha njikọ akanyocha njikọ aka ndị na-ege ntịinfographiclixarmarketingkeonweozi ozugbo ahaziri onwe yaozi ahaziri ahaziOchieahia ahia